Mety ho efa namindra olona betsaka kokoa noho ny ady sahady ny fiovan’ny toetrandro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2015 9:19 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, বাংলা, Español, Italiano, Català, English
Ankizy milalao ao anaty rano maloto ao an-tanànan'i Sylhet, Bangladesh, tamin'ny 2 Septambra 2015. Bangladesh ambany toerana angamba no firenena marefo indrindra amin'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro. Sary avy amin'i Md. Akhlas Uddin. Copyright Demotix
Ity lahatsoratr'i Jason Margolis ho an'ny The World nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 9 desambra 2015 ity dia nivoaka eto indray ho ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Eo ho eo amin'ny 26 tapitrisa eo ny olona nafindran'ny voina voajanahary manerantany toerana — izany hoe tokony ho olona iray isa-tsegondra — in-telo avo heny noho ny isan'ny olona nafindran'ny ady sy ny herisetra toerana. Ary ny ankamaroan'ny voina voajanahary dia mifandraika amin'ny toetr'andro (na dia tsy aaf-mampifandray ny toe-javatra ara-toetrandro, tahaka ny rivodoza, mivantana amin'ny fiovan'ny toetrandro aza ny manampahaizana).
Tsy ny olona amin'ny faritra iva any amin'ny vondronosy Marshall na ireo nosy sy firenena iva toerana ihany no tena marefo eo anatrehan'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro. Manana mponina betsaka monina amin'ny faritra iva mirentirenty eo anoloan'ny fiovan'ny toetrandro ihany koa ny ao Azia atsimo sy atsimo atsinanana, toy ny ao Bangladesh, Vietnam, Kambodza ary Thailandy. Heverina handrisika ny mponina amin'ireo firenena ireo hifindra toerana ny fiovan'ny toetrandro. Efa izany moa ankehitriny ny zavamisy ao Bangladesh.
Francois Gemenne, izay mandinika ny mponina mifindra toerana noho ny toe-javamisy ara-tontolo iainana sy mampianatra any amin'ireo oniversite eoropeana maro, nilaza fa mifindra toerana ao anatin'ny firenena ihany ny ankamaroan'ny mpialokaloka, ary eo akaiky dia akaiky ihany. Ary ny hita miavaka, tsy afa-mihetsika ireo tena marefo indrindra, ireo mahantra indrindra, satria lafo loatra ny fifindra-toerana.
“Ankona ny olona rehefa miatrika voina. Afa-mizaka fiovana sy miaritra fiovana sasantsasany ihany ny olona, hatramin'ny fetra iray. Saingy mafy loatra ny fioana amin'izao fotoana izao, ary haingana dia haingana no miverimberina, hany ka misy ny fetra tsy mahazaka intsony ny olona,” hoy i Gemenne. “Mahita fiaretana sy fizakàna manaraka ny toe-javamisy ataon'ny olona izahay mandra-pahatonga amin'ny teboka iray hanapahany hevitra hifindra monina.”
Mazava loatra fa sarotra ny hanondro olona iray ho “mpialokaloky ny toetrandro” raha mifamahofaho be loatra ireo hery mahatonga ny olona hifindra — mifindra monina ny olona noho ny ady, hanoanana, fahasarotana ara-toekarena ary voina ara-voajanahary.
“Miharihary fa olana saro-dresahana izy ity ary tsy mora matetika, ankoatra ireo tranga miharihary tahaka ny fiakaran'ny ranomasina, hamantarana ny fiovan'ny toetrandro ho tokana mahatonga (ny fifindramonina), hoy i Gemenne. “Mieritreritra aho, fa mety ho misy dikany ihany ny miezaka mamantatra sy mamaritra sokajim-pifindramonina noho ny toetrandro na mpialokaloka noho ny tontolo iainana. Mieritreritra aho fa tokony hanao izany isika hankatoavana ny anjara toeran'ny tontolo iainana mihamahazo vahana ho singa mahatonga ny fifindramonina.”
Hevero i Afrika, hoy i Gemenne, izay mifamatotra akaiky amin'ny toekarena ara-pambolena izay tratran'ny fikorontanana ara-toetrandro ny ankamaroan'ny mponina. “Maro amin'ny mpifindramonina ara-toekarena ao Afrika ihany koa no mpifindramonina ara-tontolo iainana satria tsy manana fidirambola intsony ry zareo.”